WHO oo sheegtay in 10% bulshada caalamka uu ku dhacay Coronavirus. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA CAALAMKA WHO oo sheegtay in 10% bulshada caalamka uu ku dhacay Coronavirus.
WHO oo sheegtay in 10% bulshada caalamka uu ku dhacay Coronavirus.
Previous articleICRC oo ka digtay in ciidamada Armenia iyo Azerbaijan ay gaystaan dambiyo dagaal.
Next articleEthiopia oo mamnuucday in ay diyaarado dul maraan biya-xieenka Webiga Nile.